Ụjọ nke agwọ dị ka Freud na site n'echiche nke nkà mmụta mmekọrịta mmadụ na ibe ya
Ụjọ nke agwọ - otu esi merie yapetophobia?
Ebee ka egwu nke oge ochie nke nwoke nke oge a si? Egwu nke agwọ bụ otu n'ime ụbụrụ kachasị ọnụ, tinyere egwu nke ụmụ ahụhụ, nke dabeere na usoro ihe nchebe nke oge ochie, mgbe mmadụ gbara gburugburu gburugburu ebe dị ize ndụ nke ihe ize ndụ dị njọ.
Kedu ihe bụ herpetophobia?
Zoophobia bụ ụdị nkịtị nke phobia, nke na-agụnye herpetophobia (ndị ọzọ na-asụ Greek - reptile, φόβος - egwu) ma ọ bụ ophiophobia - egwu nke agwọ na anụ ufe. Ike nke egwu bụ onye dị iche iche ma dịgasị iche site na nhụsịrị ala dị egwu na-emetụta ihe dị egwu, dịka nbuso egwu. Anụ na anụ ugbo na-emekarị ka obi na-atọ gị ụtọ, ọtụtụ mgbe, nke a bụ iwe na enweghị mmasị. N'okwu dị elu, a pụrụ igosipụta yapophobia:
oyiyi ma ọ bụ agwọ na-eme ka a ghara ịwakpo ya (n'ime ndụ n'ezie, mmadụ ezuteghị agwọ);
oké ụjọ na ụfụ;
Gịnị mere ndị mmadụ ji atụ egwu agwọ?
Egwu nke agwọ bụ phobia nke na-esiteghị na ncha. Kemgbe oge ochie, ọtụtụ ụmụ anụmanụ abụwo ihe dị egwu nye ụmụ mmadụ. Tupu ndi mmadu amuta ighota ndi di iche iche na adighi emeru onwe ha site na ihe iyi egwu, otutu ndu di n'elu "ebe uwa nke uwa". A na-atụ egwu agwọ ma na-edozi ya na ụmụ mmadụ. E nwere ọtụtụ ihe mere hepetophobia:
Evolution bụ idozi ụdị ọrịa dị iche iche nke nwetụworo, gụnyere egwu nke anụ ugbo.
Ebumnuche okpukpe bụ agwọ, anụmanụ dị nsọ ma ọ bụ onye na-ebu ndị agha "ọchịchịrị" n'ọtụtụ mba. Site na nwata, ndị mmadụ na-etolite n'egwu na dị nsọ na-ama jijiji n'ihu ihe ndị na-akpụ akpụ.
Ụjọ ụmụaka na- atụ egwu - nwata ahụ ejighị agwọ ahụ n'onwe ya, kama ọ nụrụ akụkọ ndị ikwu ya banyere nzukọ dị otú ahụ, nke mebiri - ụlọ ọgwụ ma ọ bụ njọ, dị njọ. Nwa dị otú ahụ, ọbụna ghọọ okenye, mgbe ọ na-ezo aka na agwọ, na-atụgharị ụjọ, "na-echeta" ihe ndị dị ka à ga-asị na ọ na-eme ya.
Nzukọ onwe onye bụ ihe nhụsianya ma ọ bụrụ na agwọ ahụ ka na-egbu mmadụ. Ọnọdụ dị otú a nwere ike ibilite n'ime oke ọhịa, n'ọhịa. N'ebe ụfọdụ: Africa, Latin America, India, agwọ na-asọba n'ụlọ ma nwee ike ịra ụra. Ihe a nile na-etinye akara na psyche na nsogbu nke nchekasị .
Ụjọ nke agwọ - nkà mmụta uche
A na-atụ egwu ụjọ na-enweghị atụ site na "ihe ọ bụla," n'ihi enweghị ihe kpatara ya. Mmadụ na-amalite ịtụ egwu agwọ, ma ọ ghọtaghị ihe mere nke a ji eme, ọ dịghị ihe kpatara ya iji mee ka egwu a nwee ọnọdụ n'ezie. Psychoanalysis na-akọwa egwu egwu na-egosi na onye ahụ na-ejighị ihe oyiyi ejupụta na akara ma ọ bụ archetypes, na-edepụta akara ahụ, ị ​​nwere ike ịmata "mgbọrọgwụ" nke kpatara egwu. Egwu nke agwọ dị ka Freud bụ nkwenye nke ụkpụrụ nwoke, ebe agwọ ahụ n'onwe ya bụ akara ngosi.
Egwu nke agwọ - psychosomatics
Mmetụta uche dịka mmeghachi omume ahụ na-ebili n'ihi mmebi nke mmegharị mmadụ na gburugburu ebe obibi n'ihi nrụgide dị ogologo. Egwu nke agwọ bụ phobia nke na-etolite etolite-dị ka ala, nke a pụrụ igosipụta na ihe ndị na-esonụ:
egwu nke agwọ, na-enweghị ike ịchịkwa;
a na-akpọ mmetụta nke enweghị nchekasị ;
onye na-enweghị ike ime ihe ọ bụla, na-achọsi ike izere nzukọ;
a na-enwe egwu nke agwọ dị ka enweghị oke ókè na ókè;
Ọ bara uru ịtụ egwu agwọ?
A na-atụ egwu agwọ ma ọ bụrụ na ịchọta mmadụ n'ọhịa ma nọrọ n'ọtụtụ mba ebe ndị mmadụ nọ na-egbu mmadụ n'ebe a, nlezianya anya agaghị emerụ ahụ. Ihe ufodu, gini mere ndi agwo ji atu egwu ihe nile:
Echiche nke na agwọ bụ anụ kachasị njọ nke ụwa dị njọ, na ụdị mmadụ 2,600, 240 bụ nsi.
Anụ ahụ na-atụkwa egwu mmadụ, ọ gaghị ebutekwa mbụ ma ọ bụrụ na mmadụ adịghị agafe na ya ma ọ bụ gaa nso efọk ahụ.
Agwọ ahụ na-adịkarịghị ahapụ nsi, nke na-emekarị ka ọ bụrụ ihe ọjọọ.
Enweghi ike n u ihe na ugha mgbe o na - emeghari - obuna ma onye mmadu gafere site na agwo agaghi ama.
N'ehihie n'ehihie agwọ na-ezo n'ime ebe ndị zoro ezo ma na-arụsi ọrụ ike naanị n'ụtụtụ na n'abalị.
Kedu otu esi egbochi ịtụ egwu agwọ?
Ụjọ na-atụ egwu na-egbu ndụ mmadụ, na-egbochi ya ọṅụ. Nkwurịta okwu na okike bụ ihe dị mkpa nke na-ejuputa ndị mmadụ ume ma dị mma. Otu esi emeri egwu nke agwọ ka ha wee nwee ike ịdị n'otu na okike. Ndị na-agwọ ọrịa na-enye ndụmọdụ ka ha ghara ịla oge na nleta onye ọkachamara ga-ekwenye na ọgwụgwọ zuru ezu, n'ọnọdụ ndị dị njọ na iji ndị na-eme udo na ndị na-eme ihe ike. N'okwu ndị dị nro nke mgbatị ụkwụ, usoro ndị a nwere ike inyere aka:
ịmụ akwụkwọ na agwọ;
ihe nchoputa nke edere nye ndi anumanu;
nchọpụta nke agwọ na-ejikọta ya na onye a hụrụ n'anya, na ọnọdụ nke zoo nke a terrarium, ụlọ zoro ezo, ụlọ ahịa anụ ụlọ;
kọntaktị kpọmkwem iji merie ụjọ na agwọ ejiri.
Nghọta na nkà mmụta uche
Kedu otu esi egbochi inwe mwute maka onwe gị?
Nsogbu nke àgwà na mmekọrịta mmadụ na ibe
Ihe omimi nke ihe omumu
Kedu ka ngwa ngwa iji daa?
Broccoli na oven
Kedu otu esi aṅụ mmiri n'ụzọ kwesịrị ekwesị iji belata ibu?
Ihe ọṅụṅụ nke Sassy
Nwunye nke Richard Gere gosipụtara mgbanaka aka
Bụrụ ụta maka mmiri
Ichekwa imeju na ọgwụ ndi mmadu na ulo
Pike na oven na foil - ụtọ ntụziaka nke mbụ efere kwa ụbọchị na maka ezumike
Kedu ihe a ga-akụ na June?
Ischia Ebe nkiri
Osisi na ruby ​​na ọla edo
Leukocytes n'ememe ahụ
Kedu esi ehicha ụkwụ ụkwụ ọkụkọ?
Kenya - Mgbochi
Kedu otu esi eme onye otom?